Pep Guardiola oo shaki galiyay mustaqbalkiisa Manchester City xilli qandaraaskiisa Etihad uu dhici doono sanad kaddib – Gool FM
(Manchester) 28 Juun 2020. Naadiga Manchester City ayaa wajaheysa cabsi badan marka la gaaro sanadka 2021, xilli macallinkeeda Pep Guardiola uu iska diiday inuu caddeeyo mustaqbalkiisa sii heynta xilka tababarennimo ee kooxdaas.
Kaddib qalbi jabkii luminta horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, Citizens ayaa laga yaabaa inay soo gaaraan akhbaaraad kale oo aan farxad lahayn, iyagoo sugaya go’aanka maxkamadda Court of Arbitration for Sport oo ay u gudbiyeen racfaan ka dhan ah ganaaxii UEFA ay ka saartay tartammada Yurub labada xilli ciyaareed ee soo aaddan.
City oo lagu soo eedeeyay inay u gafeen xeerka dhaqaale wanaagga ee Financial Fair Play ayaa halis ugu jirta inay lumiso qaar ka mid ah xiddigaheeda haldoorka ah, si la mid ah macallinkooda Guardiola haddii uu ganaaxa ay UEFA saartay laga dul qaadi waayo.
Macallinka Isbaanishka ah ayaa qandaraaskiisa Etihad uu dhici doonaa xagaaga dambe, waxaana ka harsan kaliya 12 bilood.
“Waxaan si cajiib leh u xiiseynaayaa inta ka dhimman xilli ciyaareedkan iyo kan xiga” ayuu yiri macallinkii hore ee Barcelona.
Pep ayaa sidoo kale sheegay inuu aad ugu qanacsan yahay kooxdiisa, sidoo kalena uu dadaalkiisa ugu badan galinayo.
Hase ahaatee, waxa uu hadalkiisa soo raaciyay inuusan waqti fog ka sii fikireyn hadda, waxaana uu yiri: “Ma doonayo inaan wax hor leh oo fog aan ka fikir. Hadda ma ahan. Kaliya waxaan ka fikirayaa maanta, waxaana maanta kulan adag la leenahay Newcastle, waana inaan midkaas ka fikiraa”.
Manchester City ayaa cabsi badan ka qabta inay ku guuldarreysato racfaanka CAS ay gudbisay, waxaana ay doonayaan in fasal ciyaareedkan ay gacanta ku dhigaan tartanka Champions League.
Tan iyo markii uu kooxdan la wareegay maal-qabeenka Imaaraatka kasoo jeeda ee Sheikh Mansour, City waxay shanta farood ku dhigtay tartammo kala duwan, balse waxay wali sugeysaa koobka horyaalla Yurub inay Etihad keenaan, iyagoo hadda wareegga 16-ka lugtiisa hore soo garaacay Real Madrid.
Manchester United oo afar ciyaaryahan ku qamaareysa si ay ula soo saxiixato Jadon Sancho... (Sanchez iyo Lingard oo qayb ka ah afarta xiddig)